Afhayeenka dowladda, Remis Dandjinou ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay, in ugu yaraan 15 qof ay dhinteen kadib markii baabuur xamuul ah oo sida alaab iyo dadweyne “uu dul maray miino, xaafadda Barsalogho.”
Sidoo kale, 14 qof ayaa dhintay kadib markii kolonyo baabuur ah oo siday cunno lagu weeraray gobolka Sanmatenga, sida uu ku warramay afhayeenka.
Wakaaladda wararka Faransiiska ee AFP ayaa sheegtay in ilo-wareedyo ku sugan degaanka ay ku warrameen in dadka dhintay badankood ay ahaayeen darwalladii baabuurta oo cunada ay sideen la waday dad ku barakacay dagaallo.
“Ciidamo militari oo dib u xoojin ah ayaa loo diray degaanka, waxaana socda baaritaan,” ayuu yiri Dandjinou.
Malaayiin qof oo ku nool Bukrina Faso ayaa wajahaya xaalad bani’adaamnimo oo aan caadi ahayn sababo la xiriira gaajo, xasilooni-darro iyo barakac sii kordhaya, sida uu sheegay barnaamijka cunnada adduunka ee WFP.
QM ayaa sheegtay in dagaalka sii kordhaya oo u dhaxeeya kooxo isku haysta hab jinsi iyo hab diimeed uu qasbay inay 237,000 oo qof ka barakacaan guryahooda.
Kooxo Islaamiiyin ah ayaa fuliya inta badan weerarada ka dhanka ah Militariga Burkina Faso.
Burkina Faso oo horey uu u gumeysan jiray Faransiiska, waa mid ka mid ah dalalka ugu saboolsan caalamka.